358 qof oo ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay Puntland sanadkii 2017 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland358 qof oo ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay Puntland sanadkii 2017
February 9, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliyaha Qeybta Nabadgelyada Waddooyinka Puntland, Axmed Cabdi Cali oo wariyeyaasha la hadlaya. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) 358 qof ayaa ku dhintay shilal gaari oo ka dhacay Puntland sanadkii 2017, sida lagu sheegay warbixin sanadeed ay Khamiistii soo saareen Taliska Qeybta Nabadgelyada Waddooyinka Puntland.
Sida warbixinta lagu sheegay, 3384 shil ayaa ka dhacay sagaalka gobol ee Puntland.
Gobolka Bari ayaa ah kan ugu khasaaraha badan, 141 qof ayaa ku dhimatay 1402 shil oo ka dhacay gobolkaas, sida warbixintu sheegayso.
Sababaha ugu badan oo keena shilalka gawaarida ayaa waxaa kamid ah, xawaaraha, xirasho la’aanta suunka fadhiga, khibrad xumida darawalada iyo waddooyinka oo burbursan.
Galkayo-(Puntland Mirror) Puntland government has officially closed its border with southern Somalia and will not allow vehicles into the state, according to the Puntland spokesman, Abdullahi Jama Quranjael. Puntland vice president Abdihakim Omar Amay announced [...]
Madaxweynaha Puntland oo u duulay Magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaliya
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta ka tagay magaalada Garoowe wuxuuna aaday magaalada Baydhabo si uu uga qaybgalo shirka madasha qaran ee Soomaaliya. Waxaa madaxweynaha safarka kala qaybgalay saraakiil dowladiisa katirsan [...]